Barruun LibreOffice kamiyyuu gara unkaatti bal'achuu danda'a.Salphumatti to'annoo unkaa tokko ykn isaa ol itti dabali.
Kamsha To'annoo Unkaa bani. Kamshi to'annoo unkaa faankishinii unka gulaaluuf fayyadu of keessatti qaba. Faankishinii hedduun kabala Saxaaxa Unkaa fi To'annoo Dabalataa keessatti argamu.
Saxaaxa unkaa keessatti to'annoon ni jira, amaloota fayyadama isaaniif, hiiki Amaloota unkaa, fi unkaxiqqaa hiiki.
Sajoon Unka Naanna'aa Unka Saxaaxa kabalaa irra jiru Unka Naanna'aa jedhu banu.
Sajoon Bani Haalata Saxaaxa keessatti jedhu akka galmee unkaa olkeessuuf si gargaara kanaaf yeroo mara haalata gulaalin banama.
Yeroo wantoota unka keessa jiran amaloota isaani moggaafnu dogoggorri jira ta'e (fakkeenyaaf, gabatee kuusdeetaa dura hin jirree yeroo moggaaftu), ergaan dogoggoraa ni mul'ata. Ergaan dogoggoraa kun qabduu Irra caala jedhu qabaachuu danda'a. Yoo cuqaase Irra caala, qaaqni rakkina amma uumame kan agarsiisu ni mul'aa.
Title is: Saxaaxa Unkaalee